मेगास्टार राजेशपायलमाथि शंका गरिएको एउटा निम्तो ! (निम्तोसहित) – Akhabar Today
मेगास्टार राजेशपायलमाथि शंका गरिएको एउटा निम्तो ! (निम्तोसहित)
काठमाडौं, २५ चैत । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका मेगास्टार राजेशपायल राईले सोमबार साँझ पत्रकारहरुलाई ‘सप्राइज सेलिब्रेसन’ भन्दै निम्तो बाँडे । ब्याचलर गायकको ‘सप्राइज’ निम्तो आएपछि सबैले शंका गरे, ‘कतै राजेशपायलको यो सप्राइज विवाहको घोषणा त होइन ।’
यस्तो थियो निम्तो…
गायक राजेशपायल राइको “Surprise Celebration Party” मा यहाँ को उपस्थिती जनाइ कार्यक्रमको सोभा बढाइ दिनुहोला ! स्थान रक हाउस, रातो पुल मिती : चैत्र २४ समय दिउसो को 2:३० बजे प्रार्थी : राजेशपायल राइ दर्शन नमस्ते इन्टर्टेन्मेन्ट प्रा.लि .
निम्तोमा मंगलबार ३ बजे रातोपुलस्थित रकहाउस क्याफेमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । सधैं प्रेम र विवाहको प्रश्नमा घेरिरहने राजेशपायलको ‘सप्राइज’ निम्तो पाएपछि युट्युबरमात्र होइन, मूलधारका पत्रकारसमेत हुर्रिएर रकहाउस क्याफे पुगेका थिए । तर, माहोल बेग्लै थियो । त्यहाँ न राजेशपायलको गर्लफ्रेण्ड नै थिइन्, न त विवाहको घोषणा कार्यक्रम नै थियो ।
नेपाली फिल्म ‘ए मेरो हजुर–२’को ‘उकालीका जाँदा जाँदै’, फिल्म ‘विरविक्रम’को ‘टलटल टल्कियो’ र राजेशपायलकै स्वर रहेको आधुनिक गीत ‘फूलेको वन’ गीतको भिडियोले यु–ट्युबमा करोड बढी भ्युअर्स पाएको छ ।
पछिल्लो समय अधिकांश गीतले करोड बढी भ्युअर्स पाउने गरेको छ । तर, त्यस्ता भिडियोहरु भ्युअर्स बढाउन डलर तिरेर बुस्ट गरिएको हुन्छ । राजेशपायलद्वारा स्वरबद्ध यी करोड क्लवमा प्रवेश गरेका गीतका भिडियोहरु बुस्ट गरिएको होइन । बुस्ट नगरी करोड बढी भ्युअर्स पाएपछि गायक राजेशपायलले खुसीयाली बाँडेका हुन् ।